Kulamadii Sabtida & Axada ee Horyaalka Ingiriiska (English Barclays Premier League) – SBC
Kulamadii Sabtida & Axada ee Horyaalka Ingiriiska (English Barclays Premier League)
Posted by editor on October 2, 2011 Comments
Kulamadii Sabti 01. October 2011
Liverpool ayaa 2 gool ugu awood sheegatey kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin xifaaltanka adag ee dhanka kubada cagta ahna uu ka dhaxeeyo ee Eevrton.
Ciyaartan oo aheyd adag oo ka dhacdey garoonka Eevrton ee Goodison Park, kooxda martida aheyd ee Liverpool waxay guushii shaley u aheyd tii 216 ee ay ka gaarto kooxdan ay derbiga yihiin oo 10 nin ku ciyaaraysay ka dib markii kaarka cas loo taagey ciyaaryahan Jack Rodwell.
Liverpool waxaa Laba gool oo u kala saxiixeen Andy Carroll oo goolkiisii ugu horeeyey ee xili ciyaareedkan Premier League dhaliyey iyo Luis Suarez.
Liverpool waxay iska qasaarisey gool ku laad uu goolhaye Tim Howard ka badbaadiyey ciyaaryahan Dirk Kuyt.
Kooxda Manchester United ee haysata horyaalka sanadkan waxay shaley xaqiiqsatey guushii 19-aad ee isku xigta ee gurigeeda ay ku ciyaarto ka dib markii ay laba gool oo goor dambe ay kala saxiixeen ciyaaryahanada Anderson & Danny Wellback ay ku quusiyeen kooxda martida aheyd ee Norwich City oo sanadkan Premier League-ga ku cusub.
Norwich City fursado badana yay iska qasaariyeen waxaana guusha ay gaartey Man United ay ku xajisatey hogaaminta horyaalka iyadoo hal gool oo kaliya ku hogaaminaysa kala horeynta.
Kulanka oo ka dhacay Old Trafford waxaa soo xaadiray 75,514 qof.
Blackburn Rovers 0-4 Manchester City
Manchester City oo marti u aheyd kooxda qalaalasaha ku jirta ee Blackburn Rovers waxay si xarago leh uga gaartey guul caaqibo leh ka dib afar gool ay oo kala saxiixeen qaybtii dambe ee ciyaarta ciyaaryahanada Adam Johnson, Mario Balotelli, Samir Nasri & Stefan Savic.
Ciyaarta oo ka dhacdey guriga Black Burn Rovers waxaa soo xaadiray 24, 760 qof, waxaa lagu banaanbaxay tababaraha Blackburn Steve Kean, iyagoo dalbadey in la eryo.
Sunderland 2-2 West Bromwich A.
Wolverhamton 1-2 New Castle United
Kulmada Axad 2 october 2011
Boton 1-5 Chelsea
Ciyaar ka dhacdey garoonka Reebok ee kooxda Bolton ay ku martigalisay kooxda Chelsea ee ka dhisan galbeedka London ayaa ciyaaryahan Frank Lampard wuxuu ku muujiyey muhiimada uu u leeyahay Chelsea ka dib markii sadex gool (hat-trick) uu ku hubsadey shabaqa kooxda Bolton oo daandaan la’ah guuldarooyin ka dhashay kooxo waa weyn oo gorada loo galiyey isla markaana 7-dii kulan ee la ciyaaray Premier League-ga laga badiyey lix kulan oo afar ay ku ciyaaraysay gurigeeda Reebok Stadium.
Sadexda goo lee Lampard waxaa shan ka dhigay Daniel Sturridge oo laba gool ka dhaliyey kooxdan oo sanadkii hore amah kula joogay isla markaana 12 kulan oo uu u saftey uu dhaliyey 8 gool.
Bolton halka gool ee ay la timid waxaa u saxiixay daafaca kooxda Man City ka tirsan ee amaahda haatan ula jooga Bolton Dedryck Boyat.
Ciyaarta waxaa ka soo qayb galey 24,657 qof.
Sturrige daqiiqadihii (2, 25)
Lampard daqiiqadaha (15, 27, 59)
Goolka Bolton Boyata daqiiqadii (46)
Sadex goo loo is xigta (hat-trick oo uu dhaliyey ciyaaryahan Andrew Johnson’ ayaa keenay in kooxda Fulham ay ku dubato 6-0 kooxda Queens Park Rangers oo ay isku deegaanka galbeedka London ka wada dhisan yihiin.
Fulham ayaa guushani tahay tii ugu horeysay ee ay ka keento Premier League sanadkan, iyadoo sadexda gool kale ay raaciyeen Murphy, Clint Dempsey & Bobby Zamora.
QPR waxay raadinaysay guushii ugu horeysay ee ay Fulham ka keento tan iyo sanadkii 1983-dii, iyadoo laba kooxood markii isagu dambeysay ee ay kulmaan ay aheyd sanadkii 2011-dii.
Kulankan derbiga ah oo ka dhacay garoonka Fulham ee Craven Cottage waxaa ka soo qayb galey 23, 766 qof.
Johnson daqiiqadihii (2, 38, 59)
Murphay daqiiqadii 20 gool ku laad)
Stoke city oo todobaadkii hore gurigeeda Stadium Light shaatiga ku dhegtey kooxda Manchester United oo duulaanka xili ciyaareedkan Premier League ku bilowdey 100% ka dib markii 1-1 ay ku qabatey waxaa maanta looga naxsadey laba gool oo ay kooxda Swansea ay ku dhalisey gurigeeda Liberty Stadium.
Swansea oo ka dhisan gobolka Welsh ee boqortooyada UK isla markaana ah kooxda kaliya ee aan English aheyn ee ka qayb galaysa Premier League-ga waxaa goolasha u kala saxiixay ciyaaryahanada Sinclair & Graham.
Kulankan waxaa ka soo qayb galey 19, 523 qof.
Goolasha Swansea City
Sinclair (daqiiqadii 9 pen.)
Grahmam (Daqiiqadii 85)
Tottenham ayaa guul caaqibo leh oo xasaasi ah ka gaartey kooxda xifaaltanka adage e dhanka ciyaaraha uu ka dhaxeeyo ee ay dariska yihiin ee Arsenal.
Kyle Walker oo daafaca uga ciyaara Tottenham Hotspur ayaa 30 yardi ka toogtey shabaqa Arsenal taasi oo u suurgalin wayday goolyaha 20 jirka ah ee Wojciech Szczesny in uu qabto kubadaasi waxaana goolkaasi uu ka dhigay ciyaarta 2-1 oo ay guushu ku raacdey Tottenham
Qaybtii hore ee ciyaarta Rafael van der Vaart shan daqiiqo oo ka dhiman nasashada qaybta hore ayuu gool ku hubsadey shabaqa Arsenal, balse qaybtii labaad ayaa gool xarago leh waxaa shabaqa Tottenham ku hubsadey ciyaaryahan Aron Ramsey.
Guusha Tottenham Hotspur waxay ka dhigan tahay tii afaraad oo xiriir ah, iyadoo Arsenal uga dhigan tahay guuldaradii 8-aad oo ciyaaro Away ah.
Kulankan oo ka dhacay garoonka White Hart Lane waxaa soo xaadiray 36,274 qof.
Van der Vaart (Daqiiqadii 40-aad)
Walker (Daqiiqadii 73-aad
Ramsey (daqiiqadii 51-aad)
unday, 2 October 2011 18:00 UK